ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန် လွယ် ထားတဲ့ အဆိုတော် ‘ချမ်းချမ်း’နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကူးထား တဲ့ ‘အေးမြတ်သူ’ – Shwe Naung
ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန် လွယ် ထားတဲ့ အဆိုတော် ‘ချမ်းချမ်း’နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကူးထား တဲ့ ‘အေးမြတ်သူ’
ပရိသတ်ကြီးရဲ့ ပါးချိုင့် မင်းသမီးချောလေး ‘အေးမြတ်သူ’ ကတော့ လှလှလေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်က ခပ်ဂေါ်ဂေါ်နေ တတ်ပြီး အလန်းစား နေခဲ့ပေမယ့် အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်ရှိ လာချိန်မှာတော့ အရမ်းကို တည်ငြိမ် သွားခဲ့ပြီး အလုပ်တွေကို ပိုမိုကြိုးစား လုပ်ကိုင် လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ က လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလ မှာလည်း အလှူအတန်း တွေများစွာ ပြုလုပ်နေသလို ချစ် ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားခြင်း မရှိအောင် ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
‘အေးမြတ်သူ’က အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် လူနည်းစုနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပွဲတက် လေးတွေ ကိုတော့ လက်ခံ ရိုက်ကူး တက်ရောက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ မှာတော့ ‘အေးမြတ်သူ’က ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ တစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အနုပညာ ညီအစ်မတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘အေးမြတ်သူ’ ကတော့ ကိုယ်ဝန် လွယ် ထားတဲ့ အဆိုတော် ‘ချမ်းချမ်း’နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကူးကာ “..မနေ့ က မြန်မာပလာဇာ မှာ’ SHAYI’. .ဆိုင်ဖွင့်ပွဲက ပုံတွေမှာ
ဒီပုံလေး ကို ချစ်လို့… အချစ်ခံရတဲ့အမျိးသမီးတွေ ရဲ့ အလှဆုံးအချိန်.. ဗိုက်ထဲ ကလည်း အမျိုးသမီးလေးတဲ့ …” ဆိုပြီး အချစ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေက အလှဆုံးဆိုတာကို ပြောလာပါတယ်။
အေးမြတ်သူ ကတော့ ဒုတိယမြောက် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ဆောင်ထားရတဲ့ ချမ်းချမ်းကို ကြည့်ပြီး သဘောကျအသည်းယား နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူ တစ်ယောက်လည်း ချစ်သူနဲ့ အမြန်ဆုံးရွှေလက်တွဲပြီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးရဲ႕ ပါးခ်ိဳင့္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ‘ေအးျမတ္သူ’ ကေတာ့ လွလွေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခ်ိန္က ခပ္ေဂၚေဂၚေန တတ္ၿပီး အလန္းစား ေနခဲ့ေပမယ့္ အသက္အ႐ြယ္ တစ္ခုေရာက္ရွိ လာခ်ိန္မွာေတာ့ အရမ္းကို တည္ၿငိမ္ သြားခဲ့ၿပီး အလုပ္ေတြကို ပိုမိုႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမ က လက္ရွိ ကိုဗစ္ကာလ မွာလည္း အလႉအတန္း ေတြမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနသလို ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း မရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
‘ေအးျမတ္သူ’က အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ လူနည္းစုနဲ႔ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ပြဲတက္ ေလးေတြ ကိုေတာ့ လက္ခံ ႐ိုက္ကူး တက္ေရာက္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔ မွာေတာ့ ‘ေအးျမတ္သူ’က ဆိုင္ဖြင့္ပြဲ တစ္ခုကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အႏုပညာ ညီအစ္မေတြနဲ႔ ဆုံေတြ႕ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ေအးျမတ္သူ’ ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ လြယ္ ထားတဲ့ အဆိုေတာ္ ‘ခ်မ္းခ်မ္း’နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံေလး႐ိုက္ကူးကာ “..မေန႔ က ျမန္မာပလာဇာ မွာ’ SHAYI’. .ဆိုင္ဖြင့္ပြဲက ပုံေတြမွာ
ဒီပုံေလး ကို ခ်စ္လို႔… အခ်စ္ခံရတဲ့အမ်ိးသမီးေတြ ရဲ႕ အလွဆုံးအခ်ိန္.. ဗိုက္ထဲ ကလည္း အမ်ိဳးသမီးေလးတဲ့ …” ဆိုၿပီး အခ်စ္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြက အလွဆုံးဆိုတာကို ေျပာလာပါတယ္။
ေအးျမတ္သူ ကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ေဆာင္ထားရတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်အသည္းယား ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတ္သူ တစ္ေယာက္လည္း ခ်စ္သူနဲ႔ အျမန္ဆုံးေ႐ႊလက္တြဲၿပီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္။
ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ကားရောင်းပီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ပြည်သူတွေဆီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းပေးနေသော မော်ဒယ်လ် စူးရှထက်ရဲ့ ပုံလေးများ…..
မျက်ဝန်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
ခေးကြီးလုရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး….